Zava-dehibe amin'ny fikarakarana karana ho an'ny Indiana any UAE ✰✰✰✰✰ & Visa omena
Karatra ho an'ny Indiana any UAE
Ampiharina amin'ny asa ao Dubai - Strategies and Research ho an'ny asa any UAE 🥇
Mandehana any amin'ny Banky Jobs any Dubai 🥇
navoakan'ny Dubai City Company at Novambra 23, 2017
Asa ho an'ny Indiana any UAE
Azo antoka ny mivezivezy any UAE
Karatra ho an'ny Indiana any UAE, raha ny tokony ho izy dia asa lehibe ho an'ny expats indiana. Mitombo haingana ny toekarena ao UAE, noho izany tsy mijanona asa. Raha any India ianao ary mitady asa, safidy tsara ny tontolo Arabo. Mora kokoa ny mitady asa any India noho izay azonao eritreretina. Ny ankamaroan'ny olona dia menatra tsy hanao fampiharana any ivelany noho ny lojika ary ny tahotra tsy fantatra.
Tato ho ato, ny Indiana dia nahitana paikady vaovao ny governemanta tsy ny fizarana fotsiny fa manampy amin'ny fitazomana ny fiarovana ny olom-pireneny raha miasa any amin'ny firenena vahiny izy. Iray amin'ireo tanjona voalohany amin'ny mpiasa ao amin'ny UAE. Malaza maneran-tany izany ho tany ahafahan'ny matihanina amin'ny sehatra rehetra.
Hatramin'ny fiandohan'ny taona, ny Indianina dia asiana misoratra anarana amin'ny sehatra an-tserasera izay tantanan'ny governemanta taloha niainga tany UAE izy ireo hanao asa. Ity dia mihatra amin'ny tompon'ny pasipaoro tsy ECR izay mandeha amin'ny fototry ny asa. Indianina vitsy dia mandeha amina UAE ny fitsidihana na fialan-tsasatra, ny visa mora indrindra dia ny asa. Ny governemanta dia mitaky izay olom-pirenena teratany Indiana maniry hifindra any UAE hamita ny fomba fisoratana farafahakeliny mandritra ny ora 24, alohan'ny fotoana tena ialana. Ny tanjona tokana dia ny fiarovana ny tombontsoana sy ny tombontsoan'ny Olom-pirenena Indiana raha miasa any ivelany.
Fikarohana asa any UAE
UAE dia tsenan'ny mpampiasa mpampiasa mitovy. Tsy mila miahiahy momba ny maha-firenena anao ianao. Raha ny tena izy, ny faritra Arabo manana fifandraisana akaiky amin'ny kaontinanta Indiana noho izany fanodinana mora foana raha toa ka mahafeno asa ianao. Tahaka ny olom-pirenena manerana an'izao tontolo izao, tsy maintsy mikaroka betsaka momba ireo fotoana mety ianao ary manao fampiharana mifanaraka amin'ny zavatra mahaliana anao.
Mora kokoa noho izany ny any India noho ny ankamaroan'ny faritra hafa eran'izao tontolo izao fandraisana andraikitra avy amin'ny governemanta manampy ny olom-pirenena mahay sy tsy mahay mahita asa ao anatiny sy tsy hita ny kaontinanta. Ny mponina ao India dia anisan'ireo lehibe indrindra eto an-tany. Amin'ny olon-dehibe manao ampahany amin'ny mpiasa lehibe, vitsy amin'ireto no manana asa azo antoka ka tsy azo itokisana ny karama.
Azoko antoka ve fa azonao ny toe-toekarena ao India momba ny tahan'ny karama ao an-tokantrano. Tsy tsiambaratelo na mahamenatra ny governemanta; ny governemanta Indiana dia nivoaka tamim-pahasahiana mba hanampiana ny olom-pireneny hahita asa any ivelany amin'ny tanjona lehibe toa an'i UAE. Mazava ho azy fa mampisondrotra ny harinkarena faobe avy amin'ny firenena niaviany izany. Paikady nataon'ny governemanta nasionaly izay manamora ny Indiana ny mahita asa any UAE.
Mora ny mizaka visa ho an'ny mpianatra avy any India mankany UAE. Ny vidin'ny fifandraisan'ny mpianatra dia ambany ihany koa. izany manome antoka anao toerana any UAE. Ny tanjona, amin'ity tranga ity, dia ny fametrahana tongotra ao amin'ny firenena. Afaka mianatra mandritra ny 4 taona na volana vitsivitsy ianao rehefa mahita asa. Miaraka amin'ny tahan'ny asa ambony any UAE, dia tsy afaka mahita asa ianao; na akanjo na matihanina miankina amin'ny fahazoanao
Ny vatsim-pianarana dia tendron-tsoa iray hanampy anao ho tonga any amin'ny firenena. Ny ankamaroan'ny mpampiasa any UAE dia hanampy anao hanao fahazoan-dàlana mandritra ny fotoana fohy. Raha mitantana ny fahazoana ny asa mandritra ny fotoana maharitra ianao dia hitarina ny fahazoan-dàlana ary hiafara maharitra. Fahombiazana lehibe ny fahazoana zom-pirenena any UAE, nefa tsy maintsy manam-paharetana sy mifanaraka amin'ny asanao ianao. Tokony mahazo fahatokisana amin'ireo teratany; Ny fahatokisana dia tena ilaina amin'ny kolontsaina arabo.
Ny kolontsaina Indianina sy Arabo dia manana ny fitoviana, ka ny fifandraisan'ny natiora no mampisy ny kolontsaina roa tonta. Tokony araraotinao ny fifandraisana miorina amin'ny fivavahana mba hahitana karazana asa. Ianao dia tokony mahalalaha rehefa mikaroka asa any UAE. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mikaroka ny mandinika, manombatombana ary mametraka ny fahatokisana sy ny fahatokisan'ny mpiasa iray alohan'ny hanomezana andraikitra manokana ary mizara paikady fototra amin'ny orinasa iray. Izany dia mihatra amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa.
Misokatra miaraka amin'ny fikasanao, ary afaka mahazo referralika mora foana ianao avy amin'ny namana na havana akaiky iray any India. Tsy sarotra ny mifindra any UAE amin'ny visa fahazoana asa, fa aloha, mila miasa ianao mitady asa mety. Ny fitsipi-piainan'ny olona ao amin'ny tontolo Arabo dia miankina amin'ny tanàna izay safidinao honenana.
Na izany aza dia tokony hifantoka voalohany amin'ny fitadiavana asa ianao, ary ny sisa manaraka.
UAE dia mpiasa lehibe indrindra; na iza na iza te manararaotra mankany Dubai na dia amin'ny faran'ny herinandro aza. Mivoatra haingana ny faritra Arabo izay midika fotoana mety kokoa ho an'ny orinasam-barotra sy ny asa. Raha manana fahaiza-manao ianao dia afaka mahita asa be any Dubai. Ny ambaratonga ho an'ny karama ao Dubai dia mahavariana ihany koa; ankoatr'izay, tsy dia avo loatra ny volavolan-tranon-draharahan'ny trano fonenana sy ny fampiasa amin'ny firenena praiminisitra eran-tany. Ny fampifangaroana ny menaka be dia be ary Ny kolontsaina arabo no mahatonga azy ho toerana tsara indrindra ho an'ny Indiana noho ny fahatakarana ny kolotsaina roa.
Afaka mahita asa ve aho? - Zava-mahadomelina karana ho an'ny Indiana any UAE?
Dubai dia manana mpiasa mahay dia mahay ary mitady olona mahay foana mba hameno izany andraikitra izany. Manankarena ny manan-karena noho ny solika ary tsy manana olana amin'ny fandoavana karama raha mbola mihazakazaka arak'izay notadiaviny ny asa. Ny hany olana momba ny fitadiavana asa Dubai dia ny fampidirana ny kolontsaina. Ny teratany arabo dia hentitra amin'ny finoany ary mety ho tafintohina mora raha manao zavatra hafa ianao; na dia mety tsy mizara na mankasitraka ny zavatra ninoany aza izy ireo dia manantena ny hanaovanao mifanaraka amin'ny zavatra inoan'izy ireo. Ara-drariny ny fijerinao fa ao amin'ny fireneny ianao farafaharatsiny, izy ireo no mpampiasa.
Na dia zava-tsarotra izany aza ho an'ny olona maro mitady asa any Dubai, Napetraka tsara kokoa ny Indiana noho ny fifangaroan-kolontsaina. Ny toetra mampiavaka ny tsirairay amin'ireo fivavahana ireo dia manamora ny fiainana miaraka. Tsy hanana olana ianao toy ny Indiana iray hiaraka amin'ireo Arabo. Hentitra ihany koa ny Indiana amin'ny lanjany, izay ilaina ho an'ny Arabo. Manana fifehezana toy ny Karana izy ireo.
Ny antony mazava dia ny fifandraisan'ny roa tonta. Ny fahatakarana ireo singa ara-tsosialy sy ara-pinoana dia mahatonga azy ireo ho namana maharitra. Raha ekipa mpanao dinidinika manana fahazoan-dàlana mitovy amin'ny fototry ny fahaiza-manao ianao, mety hahazo tombony amin'ny sisa ianao noho ny niavianaon. Na izany aza dia azo tsikera amin'ny lafiny maro, manana mpampiasa azy ny mpampiasa Dubai.
Ka eny, afaka mahita asa mora any Dubai ianao raha avy any India.
Ahoana no ahitako ny asa?
Tsy manam-petra ny fotoana, mifanaraka aminao ny lafy-javatra, fa asa iray monja no hotanterahinao, fitadiavana asa sahaza ho anao. Araka ny voalaza, Dubai dia manana asa maro be, saingy tsy ny asa rehetra no mifanaraka amin'ny fahaizanao, ny traikefanao, na ny tianao. Tokony ho fantatrao koa ny fantsona mamoaka ny asa toy izany any Dubai.
Raha voafaritra tsara momba ny fahazoan-dàlana ianao ary mila asa manokana, dia azonao atao ny mikaroka ireo orinasa ambony any Dubai ary raha manakarama izy ireo. Afaka ho sahy ianao ary mandefa mailaka mangatsiaka mba hanambara ny fahaizanao. Izany dia azo adika amin'ny hoe famoizam-po na fahatokisana. Izay midika hoe ampiasao dia azo inoana fa tsy hahita fotoana hiasana ianao rehefa manao fifandraisana mivantana. Mamaritra ny zavatra mahaliana anao ary Ny tanjon'ny asa dia fomba mora hahitana asa any Dubai raha mbola ho avy Expo 2020.
I Dubai dia isan'ireo tanàna ambony indrindra izay manana fifandraisana Internet maharitra. Mitombo haingana ihany koa ny haavon'ny teknolojia ao Dubai sy ny UAE manontolo. Ny ankamaroan'ny orinasa dia mampiasa sehatra nomerika hiasa na hampiasa mpanjifa. Mifantoka amin'ny Ny fitadiavana asa amin'ny sehatra an-tserasera dia mety hitarika anao any amin'ny orinasa miorina any Dubai. Ny fahavitrihana amin'ny teknika niomerika dia mahatonga azy hahasarika ny mpampiasa azy. Ny fifandraisana amin'ny mety ho mpampiasa any Dubai amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny fantsona ao amin'ny tranonkalany na ny haino aman-jery sosialy dia misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo amin'ny asa. Ny Arabo eto dia liana amin'ny teknolojia ary ny fanehoanao ny fahaizanao dia mitarika ny fanapahan-keviny.
Tombontsoa ny miasa ao Dubai
Amin'ny maha Indiana azy, ho fotoana hanova fiainana izao satria amin'ny ambaratonga ara-toekarena avo any Dubai. Ny kalitaon'ny fiainana koa somary avo be raha ampitahaina amin'i India, saingy mihena ny vidiny. Sariaka ny haba momba ny hetra; ny volavolan-dalàna momba ny fampitaovana dia manara-penitra; misy ny elektronika sy ny vidin'ny fahafinaretana ihany koa. Ny karama karama any Dubai dia tsara ihany koa raha ampitahaina amin'ny ankamaroan'ny faritra eran'izao tontolo izao.
Tadidio fa manana fotoana lehibe be ianao raha any India. Ny governemanta Indiana koa dia manohana ny fifadian-kanina fanodinana visa amin'ny asa mankany Dubai.
Jobs ao Dubai ho an'ny Indiana any UAE - "Torolàlana feno fampahalalana". Ankehitriny, ireo mpikatsaka asa avy any India dia afaka mampakatra loharano iray mankany amin'ny orinasa. Ny vavahadim-baoron'ny tranonkala antsoina hoe Dubai City Company miasa amin'ny UAE ankehitriny. Miaraka amin'izany, ny ekipanay dia manampy ireo mpitsoa-ponenana Indiana mitady asa any amin'ny faritr'i Golfa. Amin'ny maha-mpikaroka vaovao avy any Inde. Azonao atao ny mampiasa ny serivisinay mba hahita asa nofinofy any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Indrindra ao Dubai, Abu Dhabi ary Sharjah Cities. Amin'ny ankapobeny, ny ekipan'ny mpanafika dia mahavita asa mahaliana ao Dubai ho an'ny Indiana. Ary ny tolotra momba ny HR dia natokana indrindra ho an'ireo mpikatsaka karakarain'ny Indiana. Mialà sasatra Amin'ny fiorenantsika dia mora izao. Ny tolotra ataontsika dia maimaim-poana ho an'ny matianina vaovao. Azonao atao ny mampakatra ny resume etsy ambany mahita asa nofinofy any UAE. Amin'ny ankapobeny, manana ny vintana lehibe indrindra ao an-tanànan'i Dubai ny Indiana.
Rehefa miasa amin'ny orinasanao aho dia hananako ny antoka azo atolotra ny asa dia hatao?. Ny valin-teninay dia Eny, raha mbola alefanao aminay ny fampiharanao. Ny iray amin'ireo solontenanay dia hiverina aminao aminao miaraka amin'ny fampahalalana sy ny antsipirihany. Indraindray misy toe-javatra tokony hiresahanao aminao momba ny Skype na WhatsApp. Saingy aorian'ny fampiharana dia afaka manantena asa any Dubai ianao amin'ny maha-Indiana azy.
Afaka manome asa any Dubai avy any Inde ve ianao?
Eny, ny orinasa manampy ny mpikaroka asa Indiana hahita asa any Emirates. Ny iray amin'ireo tompon'andraikitra HR eto aminay dia manampy hatrany amin'ny fahazoana asa any Dubai ho an'ny mpandalo Indiana 12th ary koa ny asa ho an'i Dubai ho an'ny mpiasa mpandalo 10th Indiana. Araka izany, amin'ny ankapobeny, dia misy ny mety hitranga miaraka amin'ny Dubai City Company ho hitady asa any UAE. Ny tanjonay dia ny hanampy ireo mpiasa avy any Inde ho tonga iray amin'ireo mpiasa misimisy any Abu Dhabi na Dubai.
Ny lafiny tokana ratsy ataon'ny ekipantsika dia miatrika olana sarotra foana amin'ny fizotran'ny fampiharana. Tsy maintsy atao eo anilany, ary tokony ho 100% antoka ianao fa efa vita ny fangatahana asa ho anao miaraka am-pitandremana ireo antsipirihany any Dubai. Ny ekipanay dia manandrana hatrany ny manosika ny fangatahana anao hametraka anao asapetraka ary mazava ho azy amin'ny karama mety indrindra.
Misy foana ny asa atolotra izay azontsika omena:
Haavo Mpianatra vao vita mari-pahaizana ) Tsy latsaky ny $ 3,000 hatramin'ny $ 4,5000 isam-bolana.
Fitantanana Middle (3 hatramin'ny taona niainana 10) Tsy latsaky ny $ 5,000 isam-bolana, tranga sasany hatramin'ny $ 8,000 - $ 11,000 iray volana tsy misy bonus.
Ny mpitantana senior dia tsy maintsy manana mihoatra ny 8 traikefa an-taonany maro tao amin'ny raharaham-barotra Dubai, injeniera na fitantanana ekipa voafaritra. Ny karama amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny $ 10,000 ka hatramin'ny $ 25,000 isam-bolana.
Mpampianatra tena mahay, Mpitantana, CFO, CEO dia afaka manantena betsaka mihoatra ny $ 25,000 isam-bolana. Fa ho an'ireto asa ireto dia tolory azafady aminay.
Na izany aza, raha mitady bebe kokoa noho izany ianao, ary ny karama dia fomba iray tsy dia be loatra ho anao. Azafady mba ataovy amin'ny orinasanay ny fangatahana anao satria Dubai manana ny zavatra rehetra. Avy eo dia hitodika amin'ireo rakitrao ny tompon'andraikitry ny HR anay ary hanampy anao hampiakatra karama miaraka amin'ny karama.
Mila manana visa hitady asa any UAE ve aho?
Tsia, iray amin'ireo hevi-dehibe miaraka amin'ny orinasantsika ny fifadian-kanina haingana sy mora ny serivisy. Noho izany, amin'ny ankapobeny ny fitenenana, miaraka amin'ny orinasanay dia afaka manana taratasy momba ny asa ianao rehefa mipetraka any India ianao. Ny ankamaroan'ny asa any Dubai ho an'ny Indiana dia azo tantanana an-tserasera. Ka, tsia ny valin-teninao. afaka manampy anao hahazo ny asa any amin'ny United Arab Emirates ny orinasa. Ny iray amin'ireo hadisoana lehibe indrindra azon'ny ekipan'ny HR dia tsy ampy ny traikefa isan'andro. Ohatra, ny olona indianina mitady asa amin'ny fitsidihana visa amin'ny UAE. Ary latsaky ny roa isan-jato no laniny mety hahomby izany asa izany.
Noho izany, fomba fahazoana asa any Dubai amin'ny maha Indiana azy amin'ny foibe fiantsoana? Eny, ny hany fomba tokana hiasa any Emirates dia ny fizarana ny zava-drehetra. Ny fampiharana voalohany ho an'ny asa, dia tsy maintsy mamoaka visa ny mpampiasa ary avy eo ny sidina fanodinana dia azo vakiana ary tonga amin'ny Emirates amin'ny fomba ara-dalàna.
Ampidiro ny orinasa CV any Dubai City
Tsindrio eto ambany ny 100% Guarantee!
Azafady mba zarao ihany koa hanampy ny hafa hahita asa any Dubai
Jobs ao Dubai - tatsimo mpandoa hetra ho an'ny Expats
Karatra ho an'ny Indiana any UAE, raha ny zava-misy, dia zava-dehibe. Na izany aza, ny fifindra-monina amin'ny Emira Arabo Mitambatra dia lehibe nefa miaraka amin'ny safidy tsara ihany koa. Ny Dubai City no toerana tsara indrindra ho an'i India. Momba ny fikarohana asa ho an'ny kandidà avy any India mankany Dubai no safidy tsara indrindra. Saingy amin'ny fotoana anaovanao fanapahan-kevitra handehanana any Dubai na Abu Dhabi. Ny asa rehetra tokony hatao dia tokony hodinihina tsara alohaloha alefaso ny CV.
Rehefa avy nandinika tsara ny vavahadin-tseraseran'ny governemanta UAE ianao, azafady azafady amin'ny tranonkala mpanadinadina. Etsy an-danin'izany, tokony hanao ny fototra ho an'ny toerana misy izany fahafahana izany ianao fa tsy dokam-barotra sandoka. Ankoatra izany, afaka manolotra tolotra asa tanana ianao. Mpifindra monina avy any Inde dia afaka asaina any amin'ny toeram-piasana Dubai. Na inona na inona renao, raha ianao Manao dokambarotra ho an'ny asa any Dubai ianao. Hahavita hampitombo ny fahafahanao hahazo taratasim-piasana asa ianao.
Zava-dehibe iray hafa tokony ho fantatrao momba ny fahafahana hikarakarana ny Indiana amin'ny UAE. Moa ve izany asa manaraka izany any amin'ireo firenena any amin'ny Golfa no tena mitondra fiara vaovao ho any amin'ny birao? Ohatra, Expo 2020 asa ary Fiadiana Tompon-daka Fifa ao Qatar dia koa ny fahafahana mitombo ao amin'ny GCC. Noho izany, saika ny isam-bolana tsirairay dia hanana vintana manokana mba hahita asa any amin'ny firenena Golfa.
Ahoana no ahafahana miasa any Dubai amin'ny indianina?
Ny iray amin'ireo teboka tsara omen'ny Orinasa City an'ny Dubai ho an'ny mpifaninana dia valiny haingana. Ny ekipa fandraisana mpiasa, amin'ny ankapobeny, manana tolotra asa ao anatin'ny herinandro. Fa ny fotoana ela indrindra nitantana anay dia manodidina ny ora 6 volana. Izany rehetra izany miankina amin'ny traikefan'ny kandidà. Ankoatra izany, ny fikambananay dia mila mahazo antoka foana fa ny lafiny rehetra sy ny filana dia homena araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Manampy ny olona izahay mahita asa any Dubai. Raha ny marina dia manampy amin'ny visa izahay ary Manolotra asa any Dubai toro-hevitra. Ny orinasanay dia manome ny famindrana ny asa fitadiavana asa any Emirates. Noho izany, azo antoka fa afaka mankany Dubai ny mpirotsaka avy any India. Isika eto dia mampahatsiahy ny fikarohana asa momba ny asa miaraka amin'ny Dubai lalina, ny fahalalan'ny tsena iraisam-pirenen'ny UAE. Miorina eo amin'ny fiezahana mametraka kandidà.
Hanampy anao io fampahalalana io ho an'ny hetsika ho an'ny asa ho an'ny asa any UAE. Ny fiorenantsika dia lasa malaza noho ny serivisy izay ahafahantsika manolotra asa mahagaga ho an'ny asa any Dubai ho an'ny Indiana.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ny WhatsApp rafitra finday finday nanampy iraisam-pirenena asa mitady indrindra indrindra avy any Inde. Mba hametrahana izany fomba fitondran'ny Indiana Indiana izany any amin'ny faritra Dubai. Manome azy ireo fahalalana lalina momba ny karama tsy misy haba. Miaraka amin'izany ao an-tsainao ireo asa ao Dubai dia manome anao ny fiverenanao any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana.
Fahafahana ho an'ny indiana mipetraka any UAE
Misy be dia be ny toerana ahitahan'ny Indiana asa. Dubai City Company fanoratana ny bilaogy miaraka amin'ny fampahalalana amin'ny antsipiriany. Ary ny fomba marani-tsaina dia ny fampiasana tranonkala miasa mba hifandraisana amin'ny expats hafa. Ary misy ihany ny fomba tsara vitsivitsy ho an'ny expats Indiana toy ny vondrona asa ary ny mety hanasa ny hafa ary koa ny fampidirana mombamomba azy manokana amin'ny sarintany Dubai.
Etsy andaniny, tokony hijery ny fampiasana orinasa any Emirà Arabo Mitambatra ihany koa ianao. Iray amin'ireo tsara indrindra any UAE ny Mpanamboatra antsoina hoe Careerjet ary Orinasa malaza any India ho Gulf Monster. Tena sarobidy tokoa ny mihatra amin'ny CV anao. Mihoatra noho ny mpirotsaka 100,000 no misoratra anarana ao isan'andro, tokony tokony hanaraka an'izany koa ianao.
Raha mitady asa ianao ao Dubai sy Abu Dhabi. Tokony hojerentsika tsara ny momba antsika mpitari-dalana ho an'ireo mpila ravinahitra iraisam-pirenena. Amporisiho foana koa ny fahazoana asa ho an'ny Indiana amin'ny fomba tsara. Satria tsy tsena mora ny miditra ao Emirà raha tsy manana torolàlana sy fampahalalana mety ianao.
Hahita torohevitra sarobidy ho an'ny olona avy any Inde ianao bisy asa any Dubai. Ohatra, tokony ho fantatra ny tsiambaratelo momba ny etika ety anaty aterineto any Afovoany Atsinanana. Ankoatra izany, tokony hahafantatra fanazavana momba ny trano fialamboly ianao fomba hahazoana asa any Dubai haingana amin'ny fampiasana finday.
Noho izany fahaiza-manao sy fahaizana mahasoa momba ny sekoly ho an'ny zanakao izany. Miaraka amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny banky, ary ireo fanatanjahan-tena fialam-boly toy ny toeram-pandihizana sy ny fitondran-tena. Tsy lazaina intsony fa tsy vaovao tsara ny vaovao omena amin'ny tranonkala sasany. Tokony hampiasa irery ianao tsara indrindra ny tranokalan'ny Dubai.
Raha ny marina, ny orinasa no fomba tsara indrindra fampiasana azy tsokajiny ary orinasa hafa dia tsy manome tolotra toy izany. Ankoatra izany, ny orinasa Dubai City Company dia manao ny andro 60 amin'ny tolotra rehetra momba ny karama fikarohana. Amin'ny teny hafa dia maneho ny solontenan'ny orinasa India mpikaroka momba ny asa momba ny fampiasana ny asanay ao Dubai ho an'ny tolotra Indiana.
Jereo ny Karatra ho an'ny Indiana any UAE
Mifindra any Emirà Arabo Mitambatra miaraka amin'ny orinasa Dubai City Company. Mahavariana sy tsara kokoa Mpitantana foibe any atsinanana azonao jerena ao amin'ny bilaogy Dubai.
Izany hoe ny taona lasa, ho fanoharana, ny Emira Arabo Mitambatra Jobily dia niova avy any ivelany tany ivelany ho any amin'ny toerana iray mamakivaky sy manerantany ho an'ny mpahay mari-panaovan'ny Tandrefana. Mba hametrahana izany fomba hafa izany, ny Emira Arabo Mitambatra dia ahitana emirate fito, Abou Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah ary Umm al-Quwain. Ireo foibe fandraharahana roa lehibe indrindra ao Abu Dhabi sy Dubai manolotra fomba fiaina mahafinaritra ary asa tsara fahafahana.
Amin'ity tanjona ity, ny United Arab Emirates dia kosmopolitan, tontolo voalohany firenena manana tantara lava momba ny fitoniana ara-politika sy sosialy ho an'ny Indiana. Amin'ny fanantenana fa mirehareha mpiasa be dia be sy mianatra, fiteny maro samihafa ary maro an'isa manam-pahaizana matihanina avy any Inde, miaraka amin'ny rohy fifandraisana tsara ao amin'ny faritra sy any amin'ny foibe ara-bola hafa. Ny porofo mampiaiky indrindra Indians ao Dubai dia manana tatitra manaporofo momba ny taona 30 amin'ny fanatontosana tetik'asa ara-barotra, toy ny teknôlôjia, varotra, fanatanjahan-tena, fitsangantsanganana, ary fizahan-tany fiarovana.
Nahoana no hifindra any Dubai?
Amin'ny lafiny tsara, ny Karatra ho an'ny Indiana any UAE has a fomba tsy birao ifotony, miaraka amin'ny sasany amin'ny hetra tsara indrindra sy fandoavana ara-bola hafa na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Aza hadino ihany koa fa ny tanàna ao Dubai dia manana tombontsoam-bola avo lenta. Ary ny tsara indrindra ho an'ny fampianarana asa ho an'ny Indiana.
Mba hampisongadinana ireo fepetra tsy azo antoka ho an'ny Indiana dia mahatonga azy ho toerana malaza hitadiavana mpitantana orinasa sy ny fianakaviany. Ny ankamaroan'ny Indiana mpivoy miezaka haingana. Noho izany, mendrika ny hifindra any Dubai.
Ny hevi-dehibe iray: ao anatin'ny UAE dia mety hiaina fahasamihafana tena eo amin'ireo olona mifanena aminao any India ianao. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia ny 11% amin'ny mponina ihany dia teratany, ny 21% no Arabo vokatry ny famindrana ny mpikaroka momba ny asa any Dubai. Avy amin'ny firenen-kafa, 57% dia avy any Azia Atsimo ary ny sisa 11% dia avy any Azia Atsinanana sy Tandrefana. Tena mifankatia ny kolontsaina, ny fiteny ary ny fivavahana, miaraka amin'ireo vondrona samihafa izay mameno ny banga eo amin'ny sehatra rehetra.
Noho izany antony izany, miezaka ny mampiseho anareo ny lalana isika new jobs any Dubai. Amin'ny lafiny ratsy amin'ny toro-hevitra ho an'ny fikambanana, ny fikarohana ao Dubai dia dingana lava be. Saingy ny zavatra voalohany tokony hotadidinay dia hiezaka ny hahatonga izany ho mora kokoa aminareo. Noho izany porofo mampiaiky indrindra izay hanampy anao haka izany finday fahabangana ao Dubai. Izany no haino aman-jery sosialy ao Dubai.
Ohatra, fahafahana hahita asa ho an'ny Indiana any UAE sy fitadiavana asa any amin'ny Golfa. Manonofinofy ho azy ireo. Mba hanazavana fotsiny ny fitaovana tsara indrindra hapetraka eto an-drenivohitry ny Emirate dia ny WhatsApp Groups any amin'ny Golfa ary ny Emira Arabo Mitambatra rehetra
Nahoana no tsy nifindra tany Abou Dhabi?
Misy hevitra vitsivitsy manondro ny tokony hifindranao any an-drenivohitra fa tsy i Abu Dhabi. Ohatra, eto Emirates dia mitombo foana, misy fifanarahana vaovao apetraka isan'andro. Ohatra, na i Linkin sy Facebook aza dia nanokatra birao iray teo. Etsy ankilany, Toerana tena tsara i Abu Dhabi ho an'ny mpitantana ny fiara, injeniera ary mpiasan'ny solika sy ny entona. Noho izany, amin'ny ankapobeny, miankina amin'ny traikefa sy ny toetranao manokana izany rehetra izany.
Ny tanànan'i Abu Dhabi dia tena tsara ho an'ny olona voahazona tsara. Ilay iray miaraka amin'ny fianakaviana sy ny tranony. satria Betsaka ny fampandrenesana ny valan-javaboary ary ny feon'olom-bitsy vitsy kokoa. Misy hatrany ny fotoana vaovao any Abu Dhabi, saingy tokony ho tsaroana fa manana ity firafitra ity ny tanàna ary fifanarahana mini-panjakana amin'ny lafiny orinasa. Mampirisika ny tanàn-dehibe lehibe indrindra ny orinasanay satria izy ireo ho an'ny ho avy careers toy ny CEO sy ny HRO asa asa.
Fandaniana ao Dubai: Ho an'ny olona iray manan-kery izay maniry asa any Dubai. Ny tsy fijerena matetika matetika dia mandeha irery. Mazava ho azy fa azo atao ny miaina ambany kely ambany toy ny fiainana miasa ho an'ny 6500AED. Tsy lazaina intsony ny fandaniana amin'ny saran-dalana izay efa nokaramaina ho an'i Dubai. Noho izany, amin'ny fahazavàn'ny fiainana sarobidy ao Dubai, Tokony hampidirinao ny vidin'ny fanofana any amin'ny faritra ao Dubai mandeha fotsiny potoana any amin'ny toeram-piasanao. Toy izany koa ny solika amin'ny fiaranao, fiantohana fiara, ary ny fikojakojana ny saram-pandehanana amin'ny saram-panafody ho an'ny fiara.
Safidy tsara ny manomboka asa haingana haingana dia ny fitadiavana fahafahana miasa any UAE. Amin'ity karazana asa ity dia hanana fahafahana hahazo fiara maimaim-poana ianao ary hitondra fiara ao amin'ny toeram-piasanao. Amin'ny lafiny tsara, ianao dia handoa ihany amin'ny solika sy ny fiantohana.
Mazava ho azy, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny Indiana sy firenena hafa. Ohatra, Mpikatroka Filipino nifindra tany Dubai. Ary miaina ao amin'io toerana mahagaga io koa izy ireo. Saingy ny ankamaroan'izy ireo dia tsy miaina amin'ny maha Indianina azy. Lasa karama ambany kokoa izy ireo. Ary ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mahazo asa tsara sy asa fitadiavana asa any UAE.
Manampy ny fandefasana mivantana amin'ny asa ho an'ny Indiana amin'ny UAE isika.
Ao ve ny vidin'ny fiainana ao Dubai?
Ny volavolan-trano miaraka amin'ny rano, herinaratra, telefaona mba hiresahana amin'ny namana, mazava ho azy, Internet, sakafo fanampiny, ary fivarotana fanampiny na trano fisakafoanana indraindray. Ankoatr'izay, azo ampiana miaraka amin'ny fianakaviana / fianakavianana izay te hiaraka aminao ao Dubai. Raha oharina amin'ny fandanianao dia tokony hanampy manodidina ny AED 2000 ho an'ny olona tsirairay any Dubai ianao. Tsy mitovy amin'ny firenena hafa, lasa mora vidy ny mpiasa mpiasa. Na dia izany aza, raha jerena ny karama tena tsara any Dubai, dia afaka manakarama tovovavy potoana tapa-potoana tao Dubai avy amin'ny sasany amin'ireo eo an-toerana Orinasa Dubai raha tianao ny hitazona ny tranonao ho madio.
Ny fahafahana miasa ho an'ny Indiana amin'ny UAE lasa safidy vaovao mahaliana ho an'ny sesitany. Ka na inona na inona toerana misy anao tadiavinao hatao. Ny orinasa Dubai City dia miasa mafy amin'ny fampahalalana amin'ny antsipirihany ny antsipirihany. Ambonin'izany, mitantana ny bilaoginay ho an'ireo mpihaza asa any Azia izahay izay ahafahan'ireo kandida vaovao mahita fampahalalana sarobidy momba ny fizotry ny fahazoana mpiasa ho an'i Dubai sy Abu Dhabi.
Career Tombontsoa ho an'ny Indiana ao UAE
Ampahafantaro ny fepetra takian'ny asa ao Dubai amin'ny indianina!
Na dia mety ho marina aza izany orinasa any Dubai dia manondro ny tetik'asa fitadiavana tsara indrindra ao Emirà Arabo Mitambatra ho an'ny vehivavy. Mandritra izany koa, miezaka ny hametraka ny fototra ijoroan'ny toerana ao Dubai City isika. Ary isika dia miasa mandrakariva amin'ny asa fampianarana any Dubai sy IT jobs in Dubai. Koa araka izay tianay hataonareo ny fahafahana manao asa any Dubai dia mila mikarakara ny mpampiasa ilainao ianao.
Etsy ankilany, dia manandrana foana ny orinasa afovoany any Dubai mba hahatratrarana ny habetsaky ny fametrahana asa any Dubai. Noho izany dia miezaka mametraka azy amin'ny fomba hafa isika Recruitment ao Dubai ary mitazona mandrakariva ny mpitantana an'i India sambatra amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo vaovao.
Mikaroka ny fahafahana miasa amin'ny alàlan'ny mpiasa mpanafika
Fomba iray hafa koa Fikambanana iraisam-pirenena mpikarakara mpitsoa-ponenana dia mitazona hatrany ny fepetra takiana amin'ireo mpikaroka any Dubai. Etsy ankilany, Dubai City Ny orinasa dia tsy mahazo manolotra asa tsotra. Mampifandray mandrakariva ireo mpihazakazaka miasa hatramin'izao miaraka amin'ny sokajin'olona toy ny Headhunters, Recruitment Agencies, ary ny mpikarakara ny HR.
Fanampin'izay, tena sarotra na inona na inona hetsika mihazo azy ireo isika amin'ny alàlan'ny loharanom-baovao maro na dia avy any Pakistan aza. Ka tokony ho tonga aloha teo aloha ireo mpiasa mpanafatra tsara indrindra ao Dubai, hanao izany, mazava ho azy, Google ho an'ny Career ao Dubai ary manandrana mahita mpirotsaka ambony ao Dubai sy Abu Dhabi.
Raha ny zava-misy dia tsy maintsy hisy mpitsoa-ponenana tsy misy fepetra hiditra ao amin'ny Google ho an'ny Jobs. Ankoatra izany dia afaka mikaroka ho an'ny iraisam-pirenena ianao maso iraisam-pirenena ao Mumbai, na ireo lohan-tohatra ao an-toerana ao Hyderabad izay mitovy amin'ny masoivohon'i UAE dia afaka manampy anao asa an-tserasera ao Dubai. Ny sampan-draharahan'ny mpikaroka ao Dubai dia mikendry ny hitady olona manan-talenta any India ary mazava ho azy ireo ny mpirotsaka an-tsitrapo ary mametraka azy ireo ho ohatra ho an'ny kaonty asa any Dubai na amin'ny hafa emirates jobs.
Na ho ela na ho haingana dia ho toy ny mitady asa any UAE ianao. Mazava ho azy fa handanjalanja mandritra ny ady ho an'ny asa any Emirates miaraka amin'ny sehatra samihafa. Ohatra, ny asa an-trano any Dubai dia fomba tsara. Amin'izao fotoana izao, tokony hiady ho an'ny asa fiarovana any Dubai nozaraina miaraka amin'ny orinasa ao amin'ny LinkedIn. Ary amin'ny farany mpiasa any Dràia satria tena mora izy ireo. Avy eo dia aforeto ny kandidà mety ho kandidà ary manaova fanadihadiana lehibe. Dubai asa fiasana ny mpitantana ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra dia mitady olona vaovao hatrany India. Mazava ho azy fa mamintina izy ireo ary mora hita any Dubai foana izy ireo vonona hiasa mafy amin'ny karama miavaka.
Ok, aloha, avy any India ianao ary ny ankamaroan'ny mpitsoa-ponenana avy any Azia no miorina. Noho izany dia mifantoka amin'ny antsipirihany amin'ny fomba fohy, mazava ho azy, ary manan-talenta amin'ny hafa mitarika. Manatanteraka betsaka izahay fametrahana avy any India ho an'i Dubai. Raha ny zava-misy dia mafy orina ny antoka fa manome ny vokatra miavaka avy amin'ny fandrindrana fandraisana mpiasa ho an'ny mpanjifantsika avy any Asia isika. Tsy lazaina fa zava-dehibe ho antsika koa ny manakatona ny toerana misy ny tanàna misy an'i Dubai ao amin'ny 60 tsy azo ihodivirana hatramin'ny faran'ny 90 andro. Raha ny marina, ny orinasanay any UAE dia miezaka hatrany toerana ny mpikaroka sy ny mpitsoa-ponenana any Inde ho an'ny asa farany ao Dubai.
Nahoana no lasa be mpitia ny asa ao Dubai ho an'i Indian?
Manomboka Karoka ary mahazo fahombiazana goavana any UAE
I Dubai dia eo amin'ny mpitady asa iraisam-pirenena ho toerana ambony miroborobo hamaly faty amin'ny asa famintinana ho an'ny asa any UAE. Noho izany antony izany dia maro ny mpanatanteraka avy any India dia tonga amin'ny asa fivarotana any Dubai. Satria zava-dehibe ny mahatsapa fa ny vola azo raisina dia afaka manampy anao hahazo vola any Emirà Arabo Mitambatra.
Amin'izany toe-javatra izany, i Dubai dia iray amin'ireo tanàna lafo indrindra sy manan-karena eran-tany. Mitenena amin'ny ankapobeny ao Dubai amin'ny indianina Ny ankamaroan'ny Aziatika dia miaina fiainana mahavariana. Araka ny nomarihina rehefa nitsidika an'i UAE ianao dia firenena feno olona mpanankarena ihany koa.
Amin'izay fotoana izay ihany koa, raha fantatrao hoe aiza ianao no hitifitra anao, dia azo omena mora foana ny asa any Dubai ho an'ny freshers. Ary amin'ny farany, hifandray amin'ny olona maro be ianao izay afaka manampy anao ny fikarohana an'i Dubai.
Na ho ela na ho haingana ianao no ho kandida izay nahazo asa tamin'ny farany dia hanomboka fiainana miaina. Raha mbola mahazo ny toeram-pandihizana any an-tanànan'i Dubai. Tamin'ny fotoana nandehanana sarintany ahitana hotely tsara tarehy ho an'ny job opportunities. Indraindray trano fisakafoanana ary toeram-pivarotana lehibe toy ny asa any UAE.
Dia avy eo ny asa ao an-tanàna ary afaka ny ho lasa ianao. Eo andam-baravarana, io toerana mahatalanjona io dia ekena ho toy ny iray amin'ireo toeram-pivarotana mendrika ho an'ny vadinao manerantany. Ho fantatrao fa rehefa tonga any ianao ary manomboka manangom-bola. Noho izany, eo afovoan'ny fitadiavana a asa any Abou Dhabi ary i Dubai dia nibanjina ny fiainana ary miasa any Moyen Orient.
Asa amin'ny UAE ho an'ny Indiana ary tsy misy traikefa mpiasa?
Ny tsirairay mikatsaka asa amin'ny toerana voalohany dia ao an-tsaina dia i Dubai. Raha ny marina, misy ihany koa Abu Dhabi izay tokony ho hitanao amin'ny maha-mpikaroka anao. rehetra Indian in UAE dia manantena ny hiova asa. Noho izany dia aza miditra ho an'ny fihazana asa ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra amin'ny fitsidihana visa. Raha ny tena izy, Indians maro no nilaza fa hahazo asa amin'ny visa fitsidihana. Ny Emira Arabo 7th dia mikaroka karazana mpiasa, tsy misy traikefa mpandraharaha hatramin'ny mpitantana.
Ny fomba tsotra indrindra hahazoana asa any Dubai dia ny manomboka amin'ny ambaratonga ambany. Satria ny tolotra momba ny fitantanana dia tsy voalaza fa betsaka any UAE. Ny ankabeazan'ireo malaza fanta-daza dia tsy navoaka fa tolotra asa. Ny tolotra sy haingana indrindra lalana ho an'ny olona tsy za-draharaha dia ny hahazo asa ambany.
Ny tanjon'ny asa fikarohana DUBAI CITY: Ireo Indiana izay tonga any UAE. Ary indrindra indrindra mitady asa amin'ny hotely any Moyen-Orient, tsy hoe Emirates fotsiny. Tsy tokony hitsidika visas mihoatra ny rehetra mihitsy ianao. Miaraka amin'izany, ny mpikaroka asa Indiana rehetra dia tokony hanamarina ny tolotra asa ho an'ny visa miasa any Dubai. Miorena amin'izany Tonga avy any India ireo olona avy any India amin'ny fanantenana izay mamela visa dia omen'ny masoivoho mpanafika. Amin'ny lafiny iray, ataovy tsara izany ary alohan'ny handehanana any amin'ny firenena dia miezaha hahazo visa miasa any UAE. Mba hametrahana izany fomba izany, na ny Consul Indianina any Emirates aza dia nilaza fa mihamaro ny duping mpikaroka vaovao vao haingana ary fikoropahana vazivazy mahazatra.
Ny asany any Dubai sy Visa ho an'ny Indiana
Ohatra, ao amin'ny mpanolo-tsaina 2018 Gov dia manara-maso ny fisian'ny hosoka be dia be. Ary amin'ny ankapobeny, antso sy fitsidihana ny Indiana dia lasa niharan'ny fanadihadiana farany ny ratsy asa fitadiavana asa. Amin'ny tranga roa, ireo mponina any Asia izay mitady asa dia tokony hiresaka amin'ny consulat. Satria misy maro hafa Indian workers izay nahitan'ny mpikarakara orinasa na mpampiasa iraisam-pirenena mazàna. Amin'ny ankapobeny, ireo mpiasa any Azia tsy mahazo asa na karama dia tsy nomena azy ireo.
Hatramin'izao fotoana izao, manana olana goavana ny UAE Visa ho an'ny Indiana. Indraindray dia nampanantenaina ny asa fivarotana tsara indrindra tao Abu Dhabi ireo mpikatsaka ny asa avy any Mumbai ary tsy nahazo afa-tsy zavatra hafa ho setrin'izany. Saingy teo am-piandohan 'ny fahatongavan'ilay mpikaroka dia niasa mba hiasa ho mpiasa amin'ny karama farany ambany amin'ny tranobe fanorenana ary avy eo dia nanampy izy fa hanangom-bola bebe kokoa any India. Azonao atao koa ny manambatra ny vondron'ny asa Pakistaney mpiasa any Dubai mba hanana fahitana mazava. Ahoana ny fomba hafa ataon'ny hafa amin'ny fitantanana asa. na dia fomba fikarohana asa any Arabia Saodita ary vaovao bebe kokoa sy toro-hevitra.
Hatramin'izao fotoana izao amin'ny tapany voalohany amin'ny 2017, nahazo ny tatitra avy any Emirà Arabo mitambatra ny masoivohon'i India. Nolazaina fa tao anatin'ny fanadihadiana farany dia voavaha tao UAE ny fitarainan'ny mpiasa 540 avy amin'ny vahoaka Indiana ary nahazo asa tany Abu Dhabi na tao an-tanànan'i Dubai izy ireo. Amin'ny lafiny tsara, nilaza ilay tatitra Asan-jiolahy Amerikana any UAE dia faly be rehefa nahazo karama tsara asa amin'ny indostrian'ny banky any Dubai na Inde.
Ny asa be karama indrindra any Dubai City?
Ny teboka lehibe iray tiantsika hambara aminareo dia ny asa be karama indrindra ao Dubai City ary Karatra ho an'ny Indiana any UAE. Ity karazana asa ity dia mihoatra noho ny malaza !. Mbola misokatra ho an'ny vazaha mpirenireny any Azia ny CFO sy ny CEO. Ka raha manana traikefa tsara sy fanabeazana tsara amin'ny ambaratonga ambony ianao.
Dubai City Company Ny fanadihadihana momba ny karama ao Dubai sy Abi Dhabi dia mahatratra mihoatra ny lohan'ny asa 300. Amin'ity tranga ity, ny indostrian'ny indostria ao UAE no tsara indrindra ahazoana asa. Ary amin'ny ankapobeny, tokony ho fantatrao hoe inona no karama indrindra mandoa vola ary miezaka ny ho vaovao kandidan'ny nofinofy avy any Afrika Atsimo. Amin'ireny toe-javatra ireny, dia misy fiheverana be ny hevi-dehibe hodinihina. Rehefa misafidy fanombohana karateheo nofinofisin'ny UAE.
Zava-dehibe tokony hataonao ny fifantohana dia misy raha toa ny karama ambany dia mandanjalanja ny fiainana fa tsy maintsy mikaroka bebe kokoa aho. Amin'ny lafiny ratsy dia ny asan'ny asa azo zahana na azo tantanana ho ahy ?. Manome fiandrasana fitomboana asa tsara ve izany ary mety hiteraka fidiram-bola tsy misy hetra tsara kokoa? Na ho lasa ahazoako vola be io ?. Ka mba mizaha re Fahafahana ho an'ny Indiana amin'ny UAE sy ny Golfa ary inona izany ny safidy tsara indrindra.
Top traikefa momba ny asa any Dubai amin'ny indiana
Ny tsara indrindra amin'ny mpikaroka ao amin'ny Chief Executive Officer ao Dubai
Salama isam-bolana Mandoa vola amin'ny fahazoana fisotroan-dronono mahagaga: Dh120,000
Miaraka amin'ny salan'isa: Dh65,000 mankany Dh145,000
Raha ny zava-misy marina, ireo manam-pahaizana momba ny varotra dia tsara koa ny miasa
Tsy hiteny na inona na inona amin'ny karama isam-bolana ao anatin'izany ny fisotroan-dronono: Dh85,000
Mifanaraka amin'ny salaires: Dh60,000 mankany Dh100,000
Toy ny fanatsarana ny kaonty ambony sy ny tambajotra ara-bola ao UAE
Miaraka amin'ny asa tsara indrindra sy ny karama mahazatra isam-bolana hafa ao anatin'izany ny fisotroan-dronono: Dh75,000
Mifanaraka amin'ny salaires: Dh55,000 mankany Dh90,000
Ankoatr'ireo mpangalatra manam-pahefana miaraka amin'ny salanisa isam-bolana ahitàna ny fisotroan-dronono: Dh70,000
Eo amin'ity fahatsiarovan-dry zareo ity dia manana salan'isa izy ireo: Dh53,750 mankany Dh99,500
Miaraka amin'ny sandam-bola mahavariana mahomby ao Dubai
Ankoatra izany, asa tena sarotra mba hahatongavana any UAE ho Indiana ary ny karama isam-bolana ao anatin'izany ny fisotroan-dronono: Dh67,000
Mifanaraka amin'ny salaires: Dh60,000 mankany Dh116,000
Miasa mafy aloha vao manomboka, fa manome be dia be ny fotoana
Tsy lazaina intsony ny asan'ny dokotera any Emirà Arabo Mitambatra
Salama isam-bolana isam-bolana miaraka amin'ny fisotroan-dronono: Dh70,460
Miaraka amin'ny hafa pitsarana ambony indrindra an'ny Golfa Doctor Salary range: Dh70,000 na Dh220,000
Salary mifandraika amin'ny Ireo manam-pahaizana manokana momba ny neurologista, tsy lazaina akory ny loharanom-pandrefesana sy ny génocologie, toy izany koa amin'ireo mpitsabo saina / psikologin'ny ankizy sy mpitsabo aretin-tsaina.
Vonona hiala ao India ho any Dubai ve ianao?
Misy mihoatra ny 600,000 mpangataka vaovao ao amin'ny tranokalanay. Isan'andro dia misy asa vaovao any Dubai fa mivezivezy ao amin'ny tranokalanay ny fivezivezena Indiana. Ny orinasantsika dia manana mpanaraka vaovao mahafinaritra sy mpikaroka vaovao vaovao tsy avy any India ihany. Satria mino isika fa ny olona tsirairay dia tokony hanana kisendrasendra porofo ho an'ny tsena faran'izay henjana indrindra eto an-tany.
Nanangana orinasa iray hafa enti-manantanteraka izahay ao Dubai. Hatramin'izao fotoana izao dia nanampy mihoatra noho ny mpitsidika 1,400,000 avy any Inde izahay. Araka ny nomarihina tamin'ny serivisy izahay dia misokatra rehefa mifanaraka aminao indrindra, isan'andro 7 isan-kerinandro. Any aoriana, Afaka mandeha any amin'ny orinasa fandraisam-bahiny izahay tsy misy fanendrena.
Amin'izay fotoana izay dia afaka mandeha miaraka amin'ny fitadiavana asa fitadiavana asa. Amin'ny ankapobeny ny resaka fikatsahana karma amin'ny India no tsara indrindra amin'ny ataontsika. Amin'ny famakafakana farany, dia miandry ny kandida anao any amin'ny United Arab Emirates izahay. Azo antoka fa afaka mahazo vaovao sarobidy avy amin'ny mpikambana hafa izahay. Afaka mandeha any amin'ny fizarana mpikambana ianao ary afaka mifandray amin'ireo mpifindra monina an'arivony.
Miasa eo amin'ny toeran'ny CEO satria expat Indian
Fantatrao ve fa be dia be Indian executive CEO miasa any Emirates? Ohatra, ny asa Google ao Dubai dia efa misy amin'izao fotoana izao ho an'ireo mpikaroka momba ny asa. Noho izany, ohatra, ny fomba fiasa vaovao ho an'ireo Indiana any UAE dia efa misokatra malalaka. Ny indostria indianina dia mandray tsara any Emirates. Ary ireo fikambanana lehibe dia mividy olona vaovao avy any India isanandro.
Ohatra iray hafa momba ny fisintahan'ny lehibem-paritra ho an'ireo mipetraka any Azia ny WhatsApp. Amin'io orinasa manokana io, ireo manampahefana Aziatika dia miara-miasa amin'ny traikefa avo lenta, indrindra any amin'ny departemanta IT. Tena zava-dehibe ny mahatsapa izany Ny orinasanay koa dia manofana amin'ny WhatsApp. Ka raha manana fahatsapana tsara ny traikefa ianao dia afaka mahita asa miaraka amin'ny orinasa Dubai City. Amin'ny lafiny ratsy, tsy manome Tale Jeneraly na tompon'andraikitra amin'ny fitantanana izahay satria efa mandray mpitantana ambony amin'ny asa.
Fahafahan'ny karama ho an'ny Indiana any UAE - Natao ho anao any Dubai izy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia mila miezaka mitady asa any Abu Dhabi na Dubai ny fehin-kevitra iray.
Sarobidy tokoa ve ny mahazo asa any Dubai amin'ny maha Indiana?
Dubai, io no tena dokambarotra amin'ny fahitalavitra. Misy ankehitriny tetikasa vaovao maro tonga any amin'ny faritr'i Teluk. Ankoatra izany, i Arabia Saodita dia efa nanao faneriterena sasany ho an'ny Indiana miasa ho an'ny orinasa Saudi Arabia. Ny Qatar etsy ankilany, tsy manome zavatra hafa afa-tsy ny fifanekena 2-3 taona. Noho izany, amin'ny maha-safidy matotra ny orinasantsika ny Emirates. Misy asa vaovao mihoatra ny 30,000 nampidirina tao amin'ny vavahadin-tserasera maromaro amin'ny mpiasa vaovao ao an-drenivohitr'i Emirates ihany.
Ny fampahalalana iray hafa izay tokony handresy lahatra anao hahita asa any Dubai dia ny haben'ny Indiana any UAE. Misy mihoatra ny an-tapitrisany an-tapitrisany misora-bidy any India sy Abu Dhabi. Tokony hanome toky anao amin'ny fanapahan-kevitrao izany. satria raha olona an-tapitrisany no nahavita fiainana tsara tao UAE. Tokony hihevitra ny tenanao ho olona sarobidy amin'ny asa tsara ihany koa ianao.
Miaraka amin'ny Company City ao Dubai dia azonao antoka foana fa rehefa mampiasa ny tambajotra sosialy ianao. Hapetraka tsara ianao ary ny fahazoana asa ho an'ny Indiana ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra dia eo foana ary ho azo tanterahana amin'ny ekipa HR.
Famaranana ho an'ny Indiana rehetra izay mitady asa any Dubai
Mihevitra izahay fa miaraka amin'ny fampahalalana rehetra dia manana fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny asa ara-barotra any Emirates. Noho izany, raha ny zava-misy, avy any Inde ianao ary mitady asa any Dubai dia manan-danja mba hahatsapa fa ny fananganana mpanafika dia tsy zavatra mora atao izany.
Amin'ny lafiny tsara, eto izahay hanampy anao, mitantana izahay Vondrona WhatsApp ho an'ny mpikaroka. Fifandraisana Linkedin amin'ny rafitra mpandraharaha mpandraharaha mpandraharaha, ny resadresaka tsy manam-paharoa dia mamerina manomboka amin'ny safidy Dubai. Miaraka amin'izany, ao an-tsaina ny fitadiavana asa avy any India mankany Emirà Arabo Mitambatra dia tokony ho mora kokoa.
Miorina amin'ny traikefa niainan'ny orinasa Dubai City. Ho fanohanana ny asa sy fikarohana momba ny asa any Moyen-Orient, manana isika Hampiditra ny salanisa amin'ny toro-hevitra ao Dubai, ny ratings, ary ny sasany amin'ny toro-hevitra momba ny fomba fitadiavana asa any UAE raha avy any Inde ianao.
Mba hametrahana izany fomba hafa izany, dia miezaka ny mametraka ny andriamby rehetra avy any India isika ary manao azy ireo ho lasa mpiasa tsara any Emirà Arabo Mitambatra. Amin'ny ankapobeny, mandrakariva fikarohana Karohy MBA ary tehirizo ny fikarohanao amin'ny boky na solosaina raha toa ka manandrana antso ianao ianao miaraka amin'ny tolotra asa.
Manantena izahay ny hahita olona indianina vaovao mandeha amin'ny lazany ny fomba tsara indrindra sy ny nofinofy arabo. Izahay dia manana manantena fa ho anao izany!. Mirary soa ianao ary manantena fa hanao ny fangatahana miaraka amin'ny Dubai Company ianao.